Ciidamada AMISOM oo Dad Shacab Ah Ku Dilay Duleedka Degmada Mahadaay Ee Gobolka Sh/dhexe.
Thursday March 09, 2017 - 20:18:20 in Wararka by Super Admin
Ugu yaraan laba qof shacab ayay ciidamada Shisheeyaha AMISOM ku dileen deegaan katirsan gobolka Shabeelaha dhexe.
AMISOM ayaa shacab Rayid ah ku Xasuuqay Somalia
Wararka ka imaanaya degmada Mahadaay ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ay laba qof xoola dhaqata ah ku toogteen deegaanka Jahweyn oo qiyaastii 8 KM dhanka Bari uga beegan degmada Mahadaay.
Goob Jooge ku sugan Mahadaay ayaa SomaliMeMo khadka Taleefanka ugu sheegay in ciidamada Burundi ee qeybta ka ah soo duulayaasha AMISOM ay dadka shacabka ah si bareer ah u toogteen kadib dagaal culus oo maanta gelinkii dambe ku qabsaday tuulada Jahweyn.
Ciidamada Xasuuqa geystay ayaa ka yimid dhanka deegaanka Ceelbaraf halkaas oo sahay melleteri ay geeyeen, dadka deegaanka waxay sheegeen in ciidamada AMISOM ay khasaara kala kulmeen weerar dhabagal ah oo ay u dhigeen dagaalyahanada Xarakada Al Shabaab kadibna ay dad shacab ah ka aarguteen iyagoo ka caraysan xanuunka kasoo gaaray dagaalka.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in qof shacab xoola dhaqata ah ay qafaasheen ciidamada Burundi waxayna ula dhaqaaqeen saldhig melleteri oo ay ku leeyihiin dhismihii hore ee warashaddii Rasaasta Mahadaay.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa la sheegay in ay ugurmadeen dadkii shacabka ahaa ee dhimasho iyo dhaawaca ku noqday xasuuqii ay geysteen ciidamada shisheeye.